I-China Knitting Machine Teeth Belt Ukukhiqiza neFektri | Imishini kaMorton
Ingabe ufuna amandla ephakeme ukunitha umshini amazinyo ibhande?
Ungathola amandla aphezulu & okugqokekayo ibhande lomshini wokunitha lapha.
Intengo yokusebenza: USD 2-3.5 ngemitha ngayinye
Min Order Ubuningi: 10 amamitha
Amandla Wokunikezela: 35000 pcs per Year
1.Excellent izinga amabhande for isiyingi ukunitha umshini.
Awukho umsindo, anti-satic, ukumelana nowoyela, ukumelana nokushisa.
Amandla 3.Higher ekhethekile ibhande yendwangu isiyingi ukunitha umshini.
Ibhande lezikhathi zikaMorton lisebenzisa ubuchwepheshe obuyingqayizivele be-loop belt, amandla amakhulu we-Kevlar anamandla aqinile wokuqina, i-coefficient yokumelana nokukhathala okuphezulu futhi akukho mkhuba owelulayo.
Zonke izinto zangaphandle ezenziwe nge-polyurethane zikhethiwe ukuze kuqinisekiswe ukumelana okugqamile kwebhande, umsindo ophansi nokungalondolozwa.
Ibhande likaMorton Tooth linekhono eliphakeme lokulwa nokugqoka, ukuzinza kokusebenza kwejubane elikhulu, nempilo ende. Kuyinto efanelekayo isiyingi ukunitha imishini embonini yendwangu, iphepha umkhakha, futhi umkhakha ukudla. Umkhiqizo usagcina amandla wokusebenza omuhle ekudluliseni umthwalo omkhulu. Ixhasa ukuxhumeka kwendandatho futhi ingaxhunywa kunoma ibuphi ubude.
UMTHETHO OSEBENZA WOKUBHALA ISIKHATHI:
I-timing belt drive yakhiwa ngebhande elingenamkhawulo elinamazinyo angaphakathi kumphezulu wangaphakathi womngcele kanye ne-pulley enamazinyo ahambisanayo. Ngesikhathi sokusebenza, amazinyo ebhande anezikhala zomgudu wamazinyo we-pulley ukudlulisa ukunyakaza namandla. Uhlobo olusha lwebhande lokushayela olunezinzuzo zokudlulisa nokuhambisa igiya ngamaketanga.
Izinyathelo zokuphepha zokufaka nokusetshenziswa kwebhande lesikhathi kanye nesondo lesikhathi:
Nciphisa ibanga lesikhungo se-pulley. Uma kukhona okhandayo, kufanele kukhululwe kuqala, bese ulungisa ibanga eliphakathi nendawo ngemuva kokufaka ibhande. Ekudluliseni nge-fixed center distance, i-pulley kufanele isuswe kuqala, bese kufakwa ibhande ku-pulley, bese kufakwa i-pulley kushaft ukuyilungisa.
Langaphambilini Umshini Wokugcina Umshini Wokweluka
Olandelayo: Uhlelo Lubrication
Isiyingi Ukwaluka Machine Amazinyo Belt Ukwakha
Isiyingi Ukwaluka Machine Amazinyo Belt
Isiyingi Ukwaluka Machine Isikhathi Belt
Ukushayela Belt For Ukwaluka Machine
I-Long Life Belt Factory